“Feel Special” နဲ့ ၆ ကွိမျမွောကျ music show win သှားတဲ့ TWICE – MM Pandora
Home / MMPandora-K / “Feel Special” နဲ့ ၆ ကွိမျမွောကျ music show win သှားတဲ့ TWICE
TWICE ဟာ မကြာသေးခင်ကမှ ပရိသတ်တွေဆီကို “Feel Special” ဆိုတဲ့ mini album လေးနဲ့ comeback လေးလာခဲ့ပါတယ်။TWICE ရဲ့ “Feel Special” mini album ထဲမှာ Feel Special, Rainbow, Get Loud,Trick It ,Love Foolish , 21:29 နဲ့ Breakthrough (Korean Version) ဆိုပြီး သီချင်း ၇ပုဒ်ပါပါတယ်။
October6ရက်နေ့ Mnet ကနေ ထုတ်လွင့်လိုက်တဲ့ M Countdown မှာ TWICE ဟာ Feel Special နဲ့ ၆ကြိမ်မြောက် music show win ကိုရရှိသွားပါပြီ။ဆန်ကာတင်စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chen ရဲ့ “Shall We?” နဲ့ TWICE ရဲ့”Feel Special” တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Chen ရဲ့ Shall we? လေးက ရမှတ်ပေါင်း 6427 နဲ့ ဒုတိယရရှိသွားပြီး TWICE ရဲ့ “Feel Special” ကတော့ ရမှတ်ပေါင်း 9222 နဲ့ ခြောက်ကြိမ်မြောက် music win ကိုရရှိသွားပါပြီ။
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ M Countdown မှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ AB6IX, ATEEZ, GreatGuys, B.A.P’s Daehyun, H.O.T’s Jang Woo Hyuk, Jeong Sewoon, Ji Dong Kuk, Kang Xiwon, KARDASHIBA, Lovelyz’s Kei, Ladies’ Code, Mia, ONEUS, ONF, PurpleBeck, Se So Neon,နဲ့ Stray Kids တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့လည်း MM Pandora K ရဲ့ Facebook Group ထဲကိုလည်း ဝင် join ပေးပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အနုပညာရှင် အကြောင်းကို ဝေမျှသွားနိုင်ပါတယ်နော်။
K-Pop,K-Drama, Idols & Cele တွေရဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းများကို စုံစုံလင်လင် ဖတ်ဖို့အတွက် MM Pandora K ကို Like လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
#the_heat (MM Pandora K)
TWICE ဟာ မကွာသေးခငျကမှ ပရိသတျတှဆေီကို “Feel Special” ဆိုတဲ့ mini album လေးနဲ့ comeback လေးလာခဲ့ပါတယျ။TWICE ရဲ့ “Feel Special” mini album ထဲမှာ Feel Special, Rainbow, Get Loud,Trick It ,Love Foolish , 21:29 နဲ့ Breakthrough (Korean Version) ဆိုပွီး သီခငျြး ၇ပုဒျပါပါတယျ။
October6ရကျနေ့ Mnet ကနေ ထုတျလှငျ့လိုကျတဲ့ M Countdown မှာ TWICE ဟာ Feel Special နဲ့ ၆ကွိမျမွောကျ music show win ကိုရရှိသှားပါပွီ။ဆနျကာတငျစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့သူတှကေတော့ EXO အဖှဲ့ဝငျ Chen ရဲ့ “Shall We?” နဲ့ TWICE ရဲ့”Feel Special” တို့ဖွဈပါတယျ။
Chen ရဲ့ Shall we? လေးက ရမှတျပေါငျး 6427 နဲ့ ဒုတိယရရှိသှားပွီး TWICE ရဲ့ “Feel Special” ကတော့ ရမှတျပေါငျး 9222 နဲ့ ခွောကျကွိမျမွောကျ music win ကိုရရှိသှားပါပွီ။
ဒီတဈပတျရဲ့ M Countdown မှာ ဖြျောဖွခေဲ့တဲ့သူတှကေတော့ AB6IX, ATEEZ, GreatGuys, B.A.P’s Daehyun, H.O.T’s Jang Woo Hyuk, Jeong Sewoon, Ji Dong Kuk, Kang Xiwon, KARDASHIBA, Lovelyz’s Kei, Ladies’ Code, Mia, ONEUS, ONF, PurpleBeck, Se So Neon,နဲ့ Stray Kids တို့ဖွဈပါတယျ။
ကဲ ပရိသတျတှေ အနနေဲ့လညျး MM Pandora K ရဲ့ Facebook Group ထဲကိုလညျး ဝငျ join ပေးပွီး ကိုယျကွိုကျတဲ့ အနုပညာရှငျ အကွောငျးကို ဝမြှေသှားနိုငျပါတယျနျော။
← ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Oricon Chart မှာ ဒုတိယနေရာထိရောက်လာတဲ့ Seventeen ရဲ့ An Ode EXO အဖွဲ့ဝင်​ Lay / Zhang Yi Xing ရဲ့ ​မွေး​နေ့ →